Qeybta 1: Sida loo isticmaalo Windows Media Player sida server DLNA ah
Qeybta 2: Waa Maxay DLNA, oo waxaa weli u isticmaala?
Qeybta 3: The habab cusub oo qulquli videos ka computer in TV
Waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka farsamooyinka tahay in la hubiyo in TV ama warbaahinta kale waxaa huleeshay gal kombiyuutarka si fudud oo ku qanacsan. DLNA u taagan tahay "Digital Living Network Alliance" oo ay ahayd Corporation Sony sameeyey hubiyo in madal ay qarka u saaran yahay user si ay si fudud u sii qulquli karaan ay muujinayso ay jecel yihiin ka computer in TV iyo qeybsanaan ku xigeenka. Qalabka Dhowr iyo qalabka la xiriira ayaa tan iyo markii la soo saaray si loo hubiyo in user helo ugu fiican iyo kan gobolka ee natiijada farshaxanka ee la xidhiidha adeegga. Tutorial Tani waxay la DLNA qaban doonaa ee la xiriirta windows media player ah.
Marka ay timaado in daaqadaha ka dibna qalab khaas ah ma loo baahan yahay si loo hubiyo in server DLNA la abuuray iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in windows media player ay tahay oo keliya waxaa in arrinta la xalin sameeyo u user. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la ogaado in nidaamka uu soo sharaxay halkan waa cadaalad ah oo fudud oo user inay hubiyaan in arrinta la xaliyey by soo socda tallaabooyinka ayaa sidoo kale la socotid Screenshot in la sameeyo ka dhigi kartaa hubiyo in hannaanka xitaa fudud u user. Windows ciyaaryahan warbaahinta ayaa ka shaqeynayaan ah taas oo ka dhigaysa hubiyo in qalabka kale ee shebekadaha aan kaliya ula xidhiidhi laakiin geeyo waxaa sidoo kale lagu sameeyey hab siman. Waa arrin guud ee warbaahinta Windows ciyaaryahanka taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira iyo xal guud ayaa sidoo kale u isticmaala kuwaas oo raadinaya dhinaca barnaamijyada kale si ay u sameeyaan ay riyo rumowday DLNA bixiyo. Si aad u hubiso in aad user helo ugu fiican iyo guud ahaan natiijada laga cabsado in arrintan la xiriira, waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in nidaamka soo socda si buuxda raacay in arrinta ugu dhaqso badan loo xaliyay iyada oo helidda arrintan badan galay.
1. Si loo hubiyo in adeegyada DLNA in kuma dhisna daaqadaha waxaa firfircoonaan user waa in la hubiyo in Control Jidka Panel> Network iyo Sharing Center> adeegyada geeyo Media waxaa la socda si aad u hesho socotaan sameeyo:
2. Adeeggu wuxuu geeyo warbaahinta waxaa markaas in la si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan gagadin. Inkastoo DLNA muddada aan lagu sheegin, laakiin adeegyada geeyo warbaahinta hubiyo in DLNA waxaa waxa loo gudbiyo si ay u sameeyaan:
3. goobaha The geeyo gudahood ciyaaryahanka windows media in lagu gundhig yihiin in la kartoo iyo sidoo in la hubiyo in user helo gobolka ee shaqada farshaxanka sameeyo wax waqti ah gudahood oo dhan iyo hawlaha geeyo ee waxaa bilowday fudayd iyo qanacsanaanta,
4. windows media player ayaa Mudanayaasha sida server DLNA iyo user inay hubiyaan in server DLNA waxaa sidoo kale heli on aaladaha kale ee sida fiican u samayn kartaa. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah Roku, Airplay iyo Doku ciyaartoyda in haatan ay awoodaan in ay helaan warbaahinta Windows ciyaaryahanka si ay u helaan ama u gudbiyaan geeyo.
Sida lagu Xusi, ka hor iyo weliba in DLNA ka taagan tahay "Digital Living Network Alliance" iyo marka ay timaado su'aasha sakhiray jawaabtu waa in HAA waxaa weli la isticmaalo, iyo shirkadaha kale waxay hubinayaan in sida ugu fiican oo gobolka Fanka adeegyada waxaa loo isticmaalaa in arrintan la xiriira si ay u hubiyaan in dhibaatada la saxo marka ay timaado geeyo. Caan ah arrin lagu xukumi karaa xaqiiqda ah in inkasta oo ay abuurka ee 2003 sida ka badan 12 sano ka hor alaabta la weli u dhiibeen tiro ka mid ah shirkadaha iyo windows media player sii socoto in ay bixiyaan adeega tayada iyo fasalka. Adeegyada kale ee ay ka mid yihiin server DLNA yihiin Madaxweyne Siilaanyo iyo Playstation taas oo muujinaysa in DLNA weli waa warbaahinta caanka ah marka ay timaado geeyo. Wixii sax ah info fadlan booqo http://www.makeuseof.com/tag/dlna-still-used/ si aad u hesho dhammaan mugdiga ah ee ku saabsan fikradda xalin.
Tani waa qaybta ugu muhiimsan ee tutorial in la hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah magacyada qalab tahay in arrintan la xiriira ka dhigi lahaa. Saddexda habab cusub oo ugu horumarsan waa sida soo socota in sidoo kale uu oggolaan in user si aad u hesho ballaaran doorasho:
Waa qalab geeyo in xitaa fududeeyey fikrad iyo arrin la xiriira ee geeyo shabakad guriga iyo ka dhigay fududeeyo user waxyaalaha a. Waa in la ogaadaa in qalab qiimihiisu $ 100 oo ah guriga user caadiga ah tani waxay ka mid maalgashi waqtiga waa wax si loo hubiyo in ay muujinayso jecel iyo filimada waxa lagu huleeshay ka ah goobaha caanka ah si toos ah u PC.
The user ee streamer Doku waa xasilloon fudud sida buugga user ka dhammaato qalabka si ay u hubiyaan in user heli uusan gelin arrinta ku dhaco Mudanayaasha habka ugu fiican. Qalabka wuxuu u yahay la socon al nooc TV iyo sameynta sidoo kale waa u fududahay sida 1 2 3 iyo in uu yahay oo dhan. Image soo socda waa in la raacaa arrintan la xiriira:
Waxa kale oo ka mid ah ugu wanaagsan iyo streamer ugu horumarsan taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo ugu fiican iyo kan gobolka ee natiijada farshaxanka ee la xiriirta dayactir guud iyo sidoo kale adeega geeyo in la soo bandhigay. Mar user ku isticmaali kartaa buuga arrintan la xiriira si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada farshaxanka yihiin ma ahan oo keliya loo isticmaalo, laakiin user sidoo kale helo arrimaha lahayn.
Ilaa The set ee Roku waa mid aad u sahlan oo ay raacaan sida tilmaamaha dhamaystiran waxaa laga heli karaa bogga internetka. URL ayaa http://techforluddites.com/roku-what-is-it-and-how-do-you-use-it/ waa in la browsed si loo hubiyo in user helo gobolka muuqaalada tahay in arrintan la xiriira . Si aad u hubiso in user helo ugu fiican iyo Mudanayaasha cabsado sawirada soo socda la raaco karaa:
Apple ee Airplay ayaa sidoo kale ka dhisay ee technology taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo ugu fiican iyo kan gobolka ee natiijada farshaxanka ee la xiriirta adeegyada ay geeyo. Geedi socodka u ogolaanaya user u leh adeegsiga technology waa ugu fiican iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user ay u baahan tahay in la hubiyo in taageerada Apple Inc. ayaa waxaa sidoo kale ka heli in taabtay si loo hubiyo in arrinta uu leeyahay la xalin ay dhacdo in wax kasta oo arrinta iyo dhibaato.
1. xarunta xakamaynta waa in laga heli gal qalabka si loo hubiyo in user helo geeddi-bilowday
2. user ayaa markaas u baahan fudud si loo hubiyo in qalabka si Kan webigu waxa looga baahan yahay waa la soo xulay in ay ka faa'iideystaan ​​ugu fiican ee IDEA,
Sida loo Copy Windows 7 ka Mid Hard Drive in kale
> Resource > Windows > Sida loo isticmaalo Windows Media Player sida server DLNA ah